Services, ugwu, weghachi ego, nri, ma ọ bụ ntụrụndụ na ígwè ọrụ gụnyere video egwuregwu, juke igbe ma ọ bụ oghere igwe, ma ọ bụ ịgbanwe. Career Skills Requirement Fill machines using substances, ngwaahịa, ego, nakwa dị ka ihe ndị ọzọ. Nọgide Na-enwe ihe ndekọ nke ihe ndị ekenyela na dollars anakọtara. Enweta ego mmefu si ngwaahịa, kwadebe akaụntụ, and reconcile …
Mee Resonance Imaging (MRI) foto. Nyochaa ndidi nche na nkasi obi . Nwere ike ijere gadolinium iche onunu ogwu intravenously. On akafiakde guzo MRI ụzọ na-, kọwara nwere ike ajụjụ ọnụ onye, na ebe ọrịa. Ka itinye kọmputa data dị otú ahụ dị ka ọrịa nketa, itinye n'ọnọdụ kpọmkwem, ndu region ka a scanned, and location of …
Akwalite ego-ọrụ, dị ka ihe atụ mortgage, chepụtara echiche, na investments nduzi-ejere nke ichekwa ego na bank oru na ụlọ ọrụ achụmnta ego. Career Skills Prerequisite Decide shoppersA financial services needs and prepare recommendations to offer providers that target these requirements. Kpọtụrụ nwere ahịa na-enye ihe mere eme na-akọwa ihe ngwọta na-awa. Sell …
Direct na ike isonye na nkwadebe, herbs, na-akwadebe nke muffin azụ, meats, akwụkwọ nri, salads, ma ọ bụ ọzọ ihe oriri. Ka kwadebe na-eri nhọrọ ihe, ịzụta ngwaahịa, ma na-enwe data na akaụntụ. Job Skills Need Examine prepared or raw food products’ ọkwa iji jide n'aka na ibiere na-enweta. Nyochaa …
Exchange ego, tokens, na ibe maka customersA dollars. Pụrụ inye nweta mbinye aka nke asịwo na ụgwọ na ụgwọ. Nwere ike ịgụ na ụtụ isi ego na-ose, ma ọ bụ na-arụ ọrụ a cubicle na oghere igwe ebe na-enye ego akụ ịgbanwe folks site na mmalite nke aga. Career Skills …
Physicians ndị na-enye nlekọta ahụ ike na ego jikọrọ ọrụ ma ọ bụ onodu na ndị na-ịchọpụta, aka, na-enyere aka igbochi ọnọdụ nke ladies, karịsịa ndị na-akpali ndị amụba usoro. Nwekwara ike na-enye n'ozuzu ọgwụ ndị inyom. Job Skills Qualification Take care of and address ladies. Reveal techniques and discuss …
Were x pusi na ụzarị enyocha kwa ma ọ bụ ijere nonradioactive onunu n'ime patientis ọbara iyi n'ihi ihe ndị na-achọpụta ọrịa. Agụnye Technologists onye-elekwasị anya na ọzọ na azum na-ịgụ isiokwu. Career Skills Qualification Evaluation and examine created x-rays, teepu na video, or pc -developed information if graphics are sufficient regarding …